Iindaba-Amandla ka-Weichai, uMvelisi weTshayina ophambili ukuya kwinqanaba eliphezulu
Amandla ka-Weichai, oKhokela iJenereyitha yamaTshayina ukuya kwinqanaba eliphezulu
Kutshanje, bekukho iindaba ezikumgangatho wehlabathi kwicandelo lenjini yaseTshayina. Amandla e-Weichai adale i-generator yokuqala ye-diesel ngokusebenza kwe-thermal ngaphezu kwe-50% kunye nokuqonda ukusetyenziswa kwezorhwebo kwihlabathi.
Ayisiyiyo kuphela impumelelo ye-thermal yomzimba wenjini engaphezulu kwe-50%, kodwa ikwanokuhlangabezana ngokulula neemfuno zokukhutshwa kwe-VI / Euro VI kunye nokuqonda imveliso enkulu. Izigebenga zamanye amazwe ezinje ngeMercedes Benz, Volvo, Cummins iinjini zedizili ezikumgangatho ofanayo wokusebenza zisese kwinqanaba lebhubhoratri, kwaye ngesixhobo sokubuyisela inkunkuma. Ukwenza le injini, u-Weichai utyale imali iminyaka emi-5, i-4.2 yezigidigidi namawaka abasebenzi be-R & D. Sekuyinkulungwane enesiqingatha ukusukela ngo-1876 ukuba ukusebenza kwe-injini enkulu yedizili emhlabeni kuye kwanda ukusuka kuma-26% ukuya kuma-46%. Uninzi lwezithuthi zepetroli zosapho lwethu alugqithi kwi-40% ukuza kuthi ga ngoku.
Ukusebenza kwe-thermal eyi-40% kuthetha ukuba i-40% yamandla e-injini ye-injini iguqulwe ibe ngumsebenzi wokukhupha i-crankshaft. Ngamanye amagama, nangaliphi na ixesha xa unyathela i-gas pedal, malunga ne-60% yamandla amafutha ayamoshwa. Ezi 60% zizo zonke iintlobo zeelahleko ezingaphephekiyo
Ke ngoko, kokukhona ukuphakama kokusebenza kakuhle kwe-thermal, ukusetyenziswa kancinci kwepetroli, kokukhona kubaluleke kakhulu kulondolozo lwamandla kunye nokunciphisa ukungcola
Ukusebenza kwe-injini ye-diesel kunokugqitha ngokulula kwi-40% kwaye izame ukufikelela kwi-46%, kodwa phantse ibe ngumda. Ukuqhubela phambili, yonke i-0.1% yokusebenza kufuneka yenze iinzame ezinkulu
Ukwenza le njini ngokusebenza kwe-thermal eyi-50.26%, iqela le-Weichai R & D lenze elinye i-60% kumawakawaka eenxalenye zenjini
Ngamanye amaxesha iqela linokuphucula kuphela ukusebenza kwe-thermal nge-0.01% ngaphandle kokulala iintsuku ezininzi. Abanye abaphandi banomdla kakhulu kangangokuba bafuna uncedo kugqirha wengqondo. Ngale ndlela, iqela lithathe lonke ukwanda kwe-0.1 ekusebenzeni njenge-node, yaqokelela kancinci, yaza yatyhala ngamandla. Abanye abantu bathi kunyanzelekile ukuba uhlawule ixabiso eliphezulu kangaka kwinkqubela phambili. Ngaba le 0.01% iyavakala? Ewe iyavakala, ukuxhomekeka kwangaphandle kwamaTshayina kwioyile yi-70.8% kwi-2019.
Phakathi kwazo, injini yokutsha yangaphakathi (i-injini yedizili + injini ye-petroli) idla i-60% yeoli ye-China. Ngokusekwe kwinqanaba langoku le-46%, ukusebenza kwe-thermal kunganyuswa ukuya kwi-50%, kwaye ukusetyenziswa kwedizili kungancitshiswa nge-8%. Okwangoku, iinjini zedizili zase China ezinomthwalo onzima zinokuphuculwa ziye kwi-10.42million yeetoni ngonyaka, ezinokugcina i-10.42million yeetoni zecarbon dioxide. I-33.32 yezigidi zeetoni, elingana nesinye kwisihlanu semveliso yedizili e-China iyonke ngo-2019 (166.38 yezigidi zeetoni)